Mahatakatra tsara ny fahalalana fikojakojana ny rivotra afovoany
Sokajy 3 amin'ny fikojakojana ny rivotra afovoany 1. Fanaraha-maso sy fikojakojana ● manao fisafoana mahazatra isan-karazany amin'ny fomba voalamina mifototra amin'ny fiasan'ny fitaovana sy ny filan'ny mpanjifa. ● tariho ny mpandraharahan'ny tompony eny an-toerana ary hazavao ireo teknolojia azo ampiharina mifandraika amin'ny fampandehanan-draharaha...
Ny orinasa dia tsy superposition tsotra amin'ny sampan-draharahan'ny famokarana sy ny fanodinana amin'ny foto-kevitra nentim-paharazana, fa faritra feno ao anatin'izany ny fitantanana, R & D, famokarana, fitahirizana, lozisialy, fandraisana, birao, trano fisakafoanana, lozisialy, parking ary toerana hafa. Noho izany, ny...
Resadresaka momba ny teknolojia fanaparitahana hafanana amin'ny foibe data
Ny fitomboana haingana amin'ny fananganana foibe angon-drakitra dia mitarika fitaovana bebe kokoa ao amin'ny efitranon'ny ordinatera, izay manome tontolo iainana fampangatsiahana hafanana sy hamandoana ho an'ny foibe data. Hitombo be ny fanjifana herinaratra amin'ny foibe data, arahin'ny fitomboana mifandanja...
Fankatoavan'ny UL - Ny Air conditioner BlackShields DC dia nandalo ny fanamarinana UL
BlackShields dia faly manambara fa modely 2 an'ny kabinetran'ny kabinetran'ny rivotra DC izay namboarina ho an'ny mpanjifa amerikana nandalo ny fankatoavana UL. Taorian'ny fitsapana sy fisafoana be dia be, ny Underwriters Laboratories dia nanao sonia ny fankatoavan'ny UL ho an'ny modely 2 an'ny rivotra DC. ...
Vokatra vaovao - Unity fampangatsiahana rano ho an'ny rafitra fitahirizana angovo bateria dia natomboka
Ho fanomezana ho an'ny taona 2021, BlackShields dia nanangana Liquid Cooling Unit ho an'ny rafitry ny angovo bateria tamin'ny Janoary. Miaraka amin'ny endrika mono-block, rafitra matevina, fivoahana ambony, akaikin'ny loharano mafana, haavon'ny hafanana manokana, tabataba ambany ary valiny haingana, ny fampangatsiahana ranon-javatra. unit (rano mangatsiatsiaka...